सेप्टेम्बर ११– १८ वर्षमा के भयो ? - Birgunj Sanjalसेप्टेम्बर ११– १८ वर्षमा के भयो ? - Birgunj Sanjalसेप्टेम्बर ११– १८ वर्षमा के भयो ? - Birgunj Sanjal
सेप्टेम्बर ११– १८ वर्षमा के भयो ?
वाशिङ्गटन । १८ वर्षअघि अमेरिकामा भएको आतंककारी हमलाको आजबाट १८ वर्ष पूरा भएको छ । ११ सेप्टेम्बर २००१ का दिन भएको सो आक्रमणले गर्दा लिइएको आतंकवादविरुद्धको विश्वव्यापी लडाईंको अमेरिकी नीतिले विश्वभरी नै प्रभाव परेको छ । सो दिन न्यूयोर्कस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा र रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा आतंकवादी हमला भएको थियो । अमेरिकाले तत्कालै अफगानिस्तानमा युद्ध शुरु गरेर कट्टरपन्थी समूह तालिवानलाई सत्ताबाट हटाएको थियो ।
सेप्टेम्बर ११ का दिन इश्लामिक आतंकवादी समूह अल कायदाले गरेको आक्रमणमा दुईहजार ९९६ जना मानिसको ज्यान गएको थियो । ६ हजार भन्दा बढी मानिस घाइते भएका थिए ।
१० बिलियन डलर बराबरको भौतिक सम्पति नष्ट भएको थियो । सोही दिनको घटनाको असरले गर्दा अझै थुप्रै मानिसहरु क्यान्सर जस्ता रोगबाट मृत्युको अवस्थामा पुगेका छन् ।
चारवटा विमानको प्रयोग गरेर सो आक्रमण भएको थियो । ती एयरलाइन्स युनाइटेड एयरलाइन्स र अमेरिकन एयरलाइन्सका थिए । ती विमान अपहरण गरेर वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा ठोक्काइएका थिए । सो आक्रमणमा ११० तले दुवै टावर ढलेका थिए । अर्को विमान अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमा ठोक्काइएको थियो । त्यसले सामान्य क्षति मात्रै गराएको थियो ।
त्यतिबेला अमेरिकाले लिएका नीतिका कारण विश्वभरीका साना ठूला विद्रोही समूहहरु समेत आतंकित भएका थिए । अहिले १८ वर्षपछि पनि उनै तालिवानसँग अमेरिका वार्ता गरिरहेको छ । सम्झौताको नजिक पुगेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले गएको शनिबार मात्रै वार्ता रद्ध गरिदिएका थिए ।
सन् २०१७ मा ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा योजना जारी गरेको थियो । त्यसमा अमेरिकी विदेश नीति आतंकवादको विरुद्ध विश्वव्यापी लडाईंबाट हटेर पुरानै नीतिमा फर्केको जनाइएको थियो ।
अमेरिकाले पछिल्लो समयका चार अन्तर्राष्ट्रिय खतरा पनि पहिचान गरेको थियो । तिनमा चीन, रुस, उत्तर कोरिया र इरानलाई खतराको रुपमा उल्लेख गरिएको थियो । यी खतरामा केन्द्रित गरेर नै उसले बजेट बिनियोजन गर्न थालेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा अमेरिकाले सिरिया, इराक र अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना हटाउने प्रयास गरिरहेको छ । अहिले अमेरिकाले सिरियालगायतका क्षेत्रमा इश्लामिक स्टेटको प्रभाव कम भएको ठानेको छ । अमेरिकाले आतंकवादको विरुद्धमा लडिरहेका देशलाई दिइरहेको आर्थिक सहयोग पनि कटौती गरेको छ । उसको बुझाइमा अमेरिकाको आतंकवाद विरोधी लडाइ एक हिसाबले अन्त्यको चरणमा रहेको छ ।
यद्यपि आतंकवादका घटना अहिले पनि विभिन्न रुपमा जारी रहेको पाइएको छ । त्यसैले अमेरिका आतंकवादविरुद्धको लडाइमा सफल नै भएको हो भन्न सक्ने अवस्था भने अझै छैन ।
(बीबीसी तथा अन्य एजेन्सीको सहयोगमा)